သင့်အိမ်ထဲမှာတင် အလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တဲ့ သဘာဝမျက်နှာသန့်စင်နည်း ၆ မျိုး - ONE DAILY MEDIA
ရာသီဥတုအေးခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အနံ့ပြင်းသော မျက်နှာထုတ်ကုန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအတိုင်း အိမ်လုပ် မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်အသားအရေကို လန်းဆန်းစေပြီး သန်မာစေပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများဖြင့် သင့်အသားအရေကို ထိပ်တန်းဖြစ်နေအောင် ပံ့ပိုးပေးရန် စပျစ်သီးနှင့် ကြက်ဥကဲ့သို့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် သင့်အသားအရေကို တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သင့်အသားအရေကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းမွန်ဆုံးနည်းလမ်းအချို့ကို စုစည်းထားပါတယ်။
1. ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် သခွားသီး လိမ်းဆေး
သခွားသီးသေးသေး ၁ လုံးနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးအကြီး ၁ လုံးတို့ကို ရော၍ကြိတ်စက်ဖြင့် ရောလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ဘူးသေးသေးတစ်လုံးတွင် ၃ ရက်အထိထည့်ကာ ရေခဲသေတ္တာထဲထားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သန့်စင်သောအ၀တ်၊ ဂွမ်းစဖြင့် မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းအနှံ့ ညင်သာစွာ လိမ်းပေးပါ။ ၎င်းကို ရေနွေးနွေးဖြင့် မဆေးချမီ5မိနစ်အထိ ထားထားလိုက်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးမှ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများသည် အရေပြားကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး free radical များကို တိုက်ထုတ်ရာတွင် ကူညီပေးပါတယ်။
2. ခရမ်းချဉ်သီးဖြင့်မျက်နှာကို ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း
လှီးထားသော ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးပေါ်တွင် သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲကို ဖြန်းပေးပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးဖြင့် သင့်မျက်နှာကို စက်ဝိုင်းပုံဖြည်းညှင်းစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ အပြင်းအထန် မပွတ်မိအောင် သတိထားသင့်ပြီး မဟုတ်ရင် သင့်အရေပြားကို အနည်းငယ် ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် ခရမ်းချဉ်သီး သို့မဟုတ် သကြားများကို ဖယ်ရှားရန် သင့်မျက်နှာကို ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။
ဤ နည်းသည် လျှင်မြန်ပြီး သုံးရလွယ်ကူပါတယ်၊၊ သင့်အသားအရေကို တောက်ပချောမွေ့စေရန် အိပ်ယာမဝင်ခင် ပြုလုပ်ခြင်းက သင့်တော်ပါတယ်။
3. စပျစ်သီးနှင့် ကြက်ဥက အသားအရေ နူးညံစေပါတယ်
Blender တွင် ကြက်ဥ 1 လုံးကို စပျစ်သီး7လုံး ရောမွှေပါ ။ ကြေနေသော စပျစ်သီးစေ့များမှ ဆီများအားလုံးကို ရရှိစေရန် ၎င်းတို့ကို ကောင်းစွာရောစပ်ထားပါ။ အမြုပ်ထလာသောအခါ brush တစ်ခုအသုံးပြုကာ သင့်မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းတွင် ရောစပ်ထားသော အရောအနှောကို အယလိမ်းပါ။ ရေမဆေးခင် 15 မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါ။
စပျစ်သီးတွင်ရှိသော phytonutrients များသည် သင်၏နူးညံ့သောအသားအရေကို UV ရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့တွင် ဗီတာမင် C လည်း မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် collagen ဖွဲ့စည်းကာ သင့်အသားအရေကို နူးညံ့တောက်ပနေစေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
4. တဆေးခြောက် ပြုပြင်သန့်စင်ဆေး
နို့ပူပူ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းတွင် တဆေးခြောက် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းကို အရည်ဖျော်ပါ။ အရောအနှောကို မျက်နှာပေါ် ညင်သာစွာ ပွတ်လိမ်းပြီး မျက်လုံးကို ရှောင်ပါ။ ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောပြီး မျက်နှာကို ခြောက်အောင် မသုတ်မီ ၁၅ မိနစ်ခန့် ထားလိုက်ပါ။
တဆေးသည် အရေပြားပေါ်သို့ လိမ်းပေးသောအခါတွင် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပြီး collagen ထုတ်ပေးတာကြောင့် သင့်အသားအရည်သည် ကြာရှည် တင်းမာနေနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
5. ဗာဒံ နှင့် မယောနိစ် ပွတ်တိုက်ပေးပါ
ဗာဒံသီး (40 ဂရမ်) ကို မယောနိစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 1/8 ဇွန်းနှင့်ရောနှောပြီး ဖျော်စက်ထဲမှာ ကြိတ်ပါ။ အရောအနှောကို သင့်မျက်နှာကို ညင်သာစွာ နေရာလွတ်မကျန်အောင် လိမ်းကျံ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ရေနွေးနွေးဖြင့် မဆေးချမီ 10 မိနစ်ခန့် ထားလိုက်ပါ။
မယောနိစ် သည် အရေပြားကို အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး ဗာဒံစေ့သည် ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်ခြောက်သွေ့သောအသားအရေအတွက် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
6. ကီဝီသီးကို ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း
အခွံခွာပြီး ထောင်းထားသော ကီဝီသီး ၁ လုံးကို သကြားညို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ၊ သံလွင်ဆီနှင့် အနည်းငယ် ရောမွှေပါ။ သင့်လက်ချောင်းများကို အသုံးပြု၍ အရောအနှောကို စက်ဝိုင်းပုံစံဖြင့် ၃-၅ မိနစ်ခန့် သင့်မျက်နှာပေါ်သို့ ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးနောက် ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။
ကီဝီသီးတွင် amino acid နှင့် ဗီတာမင်စီတို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အရေပြားအတွင်းရှိ အဆီများကို လျှော့ချရန် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အညိုရောင်သကြားသည် သင့်အရေပြားကို သန်မာစေကာ သံလွင်ဆီသည် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သေနေသော အရေပြားဆဲလ်မျကို ပွတ်တိုက်ပေးသည့် ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဟာအရင်စမ်းကြည့်မလဲ။ သင် အသုံးပြုနေသည့် အသားအရေထိန်းနည်းများကိုလည်း မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ် ။
သတိပြုရန်- ဤဆောင်းပါး၏ ရင်းမြစ်အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု ရှိစေရန် 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုပြင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။